United Arab Emirates bụ mba mara mma nke nwere ọtụtụ ohere iji nọrọ oge. Ighachite ebe a, ọ bara uru ka ị gaa na nke ikpeazụ, otu n'ime ntụrụndụ nke UAE - Fujairah. Ọ ma ama maka ala ndị mara mma, na-asọba n'akụkụ osimiri site n'akụkụ osimiri, nke na-eburu nnukwu ebe na ugwu Hajar na ebe nkwụ. Ezigbo ọnọdụ ihu igwe na-eme ka Fujairah bụrụ ezumike mara mma ezumike ọ bụghị nanị maka ndị njem nleta si n'akụkụ ụwa nile, kamakwa maka ndị isi Arab. Kedu ihe nke a na-eme ka ọ dị ezigbo mkpa?
Geography nke mmụọ
Fujairah (Fujairah) bụ onye isi nke United Arab Emirates. Gburugburu ya niile bụ mita 1166. kilomita. Dika onu ogugu ndi onu ogugu ndi mmadu no, na 2008 137,940 ndi bi na ebe a, ha na-abawanye nwayo.
Banyere ebe Fujairah dị, ị nwere ike ikwu na ọbụnadị na ọnọdụ ya enwere ihe pụrụ iche. Nke a bụ nanị mpi nke na-aga na mmiri nke Ocean Ocean site na Gulf of Oman (nke a na-akpọ ya East Coast). Ma ọ dịghị ụzọ ọ bụla ga-esi gaa na Gulf Persia site na Fujairah. Aha nke ókèala ahụ kpebiri ọnọdụ ya, ebe ọ bụ na okwu ahụ bụ "Fujairah" sitere na Arabic sụgharịrị ịbụ "ụtụtụ". N'ezie, na map nke UAE Fujairah - ebe anyanwụ na-adabere maka ndị ọzọ na-erughị ala.
Okwu mmalite na Fujairah
A na-ele nganga nke Emirate nke Fujairah dị ka akụ na ụba ya, ma ọ bụghị n'efu: oke osimiri dị iche iche na-asọba n'akụkụ mmiri ahụ ruo 90 kilomita, ebe ndị mara mma n'okpuru ugwu, na-agba mmiri na greenhouse, gorges ugwu na isi iyi. Ihe a niile na-adọta ọtụtụ ndị na-eme ezumike kwa afọ. Site na ezumike gị si Fujairah (UAE) ị ga-eweta foto na ncheta dị ebube.
Site n'okporo ụzọ, isi obodo nke ndị mmụọ nsọ, obodo Fujairah, nwere aha yiri ya. Enweghi ulo ogwu na nnukwu osisi, ya mere ndi mmadu nwere ihe ndi ozo n'uwa. Obodo ahụ ga-adị jụụ ma hụ ịma mma nke ụwa mmiri n'okpuru: ụyọkọ coral na-adọta ọtụtụ ndị si gburugburu ụwa. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-ahụ maka ịnwụ na mmiri na-aga Fujairah, ọ bụghịkwa ndị Ijipt.
Fujairah bụ nke kachasị nta niile. N'afọ 1901, ọ hapụrụ Emirate nke Sharjah, ndị gọọmentị ahụ abanye na 02.12.1971. Ndị ụkọchukwu nke ndị Ash Sharki na-achịkwa Fujairah.
Ndabere nke onodu aku na uba nke uzo bu ugbo na igbu azu. Fujairah nwere nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri ya, nke na-enye ndị bi na ọrụ, yana azụ na azụ mmiri.
Na Fujairah, ebe ikuku mmiri na-achịkwa. Ị nwere ike izu ike ebe a na-adị kwa afọ, dị ka ọdịda nke ukwuu na-ada site na February ruo March, ma ọ bụghị ogologo oge. N'oge okpomọkụ, site na etiti oge uto ruo etiti oge ụbịa, nkezi okpomọkụ kwa ụbọchị bụ + 35 Celsius C (e nwere okpomọkụ dị ọkụ ruo 40 ° C). A na-eme ka mmiri dị ọkụ ruo + 25 ... + 27 Celsius C. Site na November ruo April ọ dị nnọọ mma: na nkezi + 26 ... + 27 Celsius C. Mmiri n'ime oké osimiri rute + 20 Celsius C.
Hotels na Fujairah
Maka ndị ezumike Fujairah bụ isi hotels na Ocean Ocean. Ọ bụ ebe a na e nwere ohere magburu onwe ya nke nwere ike ịzụta ụlọ site na deluxe na ndị na-elekọta ndị Juu na-ele anya n'osimiri Gulf of Oman. Na Fujairah, ezumike magburu onwe ya na ụmụaka: ụlọ nkwari akụ ọ bụla nwere ndị ọrụ kwesịrị ekwesị, e nwere ụlọ ụmụaka ma ọ bụ ụlọ egwuregwu maka egwuregwu, yana ebe egwuregwu na ebe egwuregwu.
Ụlọ elu ndị dị na ndị ahụ dị elu bụ ihe dịka 20, ọtụtụ 5 * na 4 * -staff, ma ị nwere ike ịchọta nhọrọ ebe obibi na mmefu ego: 3 * na 2 *. Ọ bụrụ na ịzụta njem njegharị na Fujairah, mgbe ahụ ị ga-aza ajụjụ maka nri na-edozi ahụ. Obodo ndị nwere obi ụtọ, ndị na-ewu ewu ma na-ewu ewu na Fujairah na-enye ndị niile na-ejikọta ọnụ ma na-ahụ n'akụkụ osimiri ha. N'ebe ndị njem kachasị mma na Fujairah, dị ka ndị njem nleta, ị nwere ike ịgụnye hotels dị ka Radisson Blu Resort Fujairah, osimiri osimiri Royal, Fujairah Rotana Resort, Oceanic, Hilton Fujairah na ndị ọzọ.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Fujairah
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ọnụahịa nri na Fujairah, ha anaghị elu. Otú ọ dị, ọ dị mfe karị ịga njem nke na-agụnye nri atọ n'ụbọchị, ebe ọ bụ na azụmahịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe a ezughị ezu. Nchịkọta nke ụlọ ọrụ gastronomic dị n'ógbè ahụ na-enye gị efere nke Europe, Mediterranean, Chinese na, n'ezie, ndị Arabia. Ụlọ oriri na-ewu ewu kachasị mma bụ ụlọ Al-Mishuan, Hadramaut, Al Bake na Café Maria.
Ebe nkiri na ebe nkiri nke Fujairah (UAE)
Ihe omuma a bu ama nani nani ya mara mma. Fujairah bara ọgaranya n'ememe ncheta ya, nke mbụ ị ga-aga:
onye kasị ochie na ụlọ alakụba UAE Al-Badia , nke e wuru na narị afọ ise gara aga;
ebe siri ike Batina Fort, nke dị n'ugwu;
ebe nchekwa nke ochie nke Al-Heil;
mkpọmkpọ ebe nke ụlọ elu ahụ na ụlọ ihe ngosi nka ihe ochie nke dị nso na ha;
ogige nke Sain al-Madhab;
obodo nke nketa (ka a ghara inwe mgbagwoju anya na Dubai!);
bụ ebe mbụ e wusiri ike nke El-Heil.
Ntụrụndụ dị na Fujairah dị nnọọ iche:
enwere otutu ogige ntụrụndụ na ọtụtụ ntụrụndụ ntụrụndụ;
A na-ewere bullfights na November-December na ntụrụndụ kachasị mma na nke ntụrụndụ. Omenala a adịla kemgbe oge ndị Portuguese. Na-agbapụ aka ma na-agbanye ibe ha gburugburu gburugburu, ọ dịghị onye gburu ma ọ bụ nwee nkwarụ;
Mmiri mmiri na Fujairah na-adọta ọtụtụ ndị nlegharị anya kwa afọ: ụwa dị n'okpuru ebe a dị ọkụ ma dịgasị iche;
Safari site na Fujairah site na oke ohia.
Enwere 4 nnukwu ụlọ ahịa na Fujairah. Ụfọdụ ụlọ ọrụ njem, na mgbakwunye na njem ndị a na- aga na Fujairah na UAE, na-enye njem nleta pụrụ iche nke ụlọ ahịa kachasị mma na boutiques.
Na mgbakwunye, Fans nke ịzụ ahịa na Fujairah ga-enwe mmasị n'ịzụ ahịa na ahịa Friday, ebe ndị njem nleta na-azụkarị ihe ncheta na ngwaahịa ndị e ji ọla kọpa dị oké ọnụ ahịa mee. Anyị na-atụ aro ka ị nwee mmasị n'ọmarịcha mmiri ọdịda mmiri nke Al-Vurraia , ubi nke Ain Al-Madhab , iji gaa nleta na ugwu ma ọ bụ Oman Gulf. N'ahịa na ụlọ ahịa Fujairah, enwere ihe ịzụrụ dị ka onyinye nye onwe gị na ezinụlọ gị.
Na ụkpụrụ, nke a bụ ihe niile ị ga - ahụ na Fujairah na nke gị.
Nkọwa nke osimiri nke Fujairah
Akụrụngwa ntụrụndụ na Fujairah dị ka ndị ike gwụrụ na ndụ na-agwụ ike ma na-arụsi ọrụ ike nke obodo ukwu na-ahọrọ iji oge ha ezumike ebe a ma chọọ itinye ya na udo, nke dị jụụ na nzuzo. Ha adighi echebara oke osimiri nke Fujairah anya. Isi ihe bụ inwe anyanwụ, osimiri na nkwụsị.
Na Emir, ọ bụghị osimiri niile dị iche iche. A na-ekewa n'ụsọ oké osimiri n'ime ngalaba. Ụfọdụ n'ime ha zụtara hotels na ogige mmiri na ala, ụfọdụ na-akwụ ụgwọ. E nwere osimiri dị iche iche na Fujairah, ma aja ma nkume. Ma na nke a, enweghi ihe ndi ozo n'osimiri. Ngwurugwu na ebe ọ bụla ọ bụla nwere ụgwọ ịgbazite.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na osimiri ndị dị na Fujairah bụ aja, ndị njem nleta na-eme ka ha nwee ike igwu mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, nke dị nso na ntanetị mmanụ. N'ime obodo ndị dị na Corfakkan , Badia, Al Aka Beach, Sandy Beach, obodo Dibba egosipụtawo onwe ha.
Egwuregwu na egwu mmiri n'ebe a dị nnọọ nchebe karịa na Egypt. Mgbe ụfọdụ, site n'ụsọ oké osimiri nke Fujairah, ndị ọzọ na-ezute ụsọ oké osimiri ndị nwere ụkwụ. Ha anaghị adị ize ndụ nye mmadụ ọ gwụla ma a na-akwa ha ọnụ. Ndị Sharks na-egwu mmiri n'ụsọ oké osimiri maka ọtụtụ azụ na azụ.
A na-ere mmanya na- egbu egbu na Fujairah na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na hotels, a machibidoro iwu ịṅụ mmanya na-aba n'anya n'èzí. Ọ dị mkpa icheta na nke a bụ mba Muslim, na ịkwanyere iwu na ụzọ ndụ ndị ọzọ ùgwù. Ya mere, ọ bụrụ na anyị asị na ọ ka mma: Fujairah ma ọ bụ Shaịja , mgbe ahụ bụ Emir nke Fujairah. Na Sharjah, a na-edebe iwu iwu iwu na iwu, ma a machibidoro ịṅụ mmanya mmanya ọbụna na hotels.
Echefula otú e si eji ejiji na ndị njem nlegharị anya Fujairah. Ọ bụghị omenala ka ndị inyom na-asa mmiri ma na-asa ahụ na bikinis na-akọrọ osimiri. N'ebe ndị ọzọ, ọ dị mkpa iburu n'uche ogologo oge uwe ndị ahụ, ịdị omimi nke decollete, na ọnụnọ na ogologo nke uwe aka. Ha adịghị amasị ndị njem nleta na-asọpụrụ iwu obodo .
Ọrụ ụgbọ njem
Na isi obodo Fujairah, dịka ọ bụla dị elu nke UAE, e nwere ọdụ ụgbọ elu . Ọ dị ihe dị ka kilomita 3 n'ebe ndịda nke obodo ahụ, na-arụ ọrụ kemgbe afọ 1987, ọ bụkwa nanị ya dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Emirates. Na mgbakwunye na njem njem, ọ na-eburu ụgbọelu azụmahịa, ma na-ewe ụgbọ elu ụgbọ elu.
N'ebe ọdụ ụgbọelu ndị isi na obodo Dubai si Fujairah, ụgbọ ala nwere ike ịgbagha. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ dịghị njem obodo, ndị njem nleta na-ejikarị taxi: ọrụ a na-arụ ọrụ. Ụgwọ nke ọrụ na-achịkwa steeti, na-echegbu onwe gị banyere kilomita na-agba ọsọ na ụgwọ adịghị mkpa. A na-akwụ ụgwọ ahụ n'ebe niile.
Ọrụ mmezigharị ụgbọ ala dị na Fujairah ka mepụtara: ị nwere ike ịgbazite ụgbọ ala ọ bụla (oke nhọrọ). Nke a na - enye gị ohere ịga njem UAE niile n'enweghị oge na ego buru ibu, nakwa ịga n'isi obodo Abu Dhabi na obodo kachasị na Emirates - Dubai. Ụzọ ndị a dị larịị, na peturuolu ma e jiri ya tụnyere mba Europe na CIS dị ọnụ ala.
Kedu ka esi aga Fujairah?
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Fujairah (UAE) nwere ọdụ ụgbọ elu ya, a na-ejikarị ya ka ọ bụ ụgwọ ma ọ bụ ịnakwere chaatị. Site n'ókèala mba nke mbụ USSR enweghi ụgbọ elu nkịtị, naanị site na Europe ma ọ bụ ịkwaga Dubai. Ọ bụghị ngwa ngwa ma dị mfe.
Ebe ọ bụ na ebe dị anya site Dubai ruo Fujairah bụ kilomita 128 (1.5 awa ụgbọ ala), ọtụtụ ndị njem nleta na-abata na Dubai. Site n'ọdụ ụgbọelu ọ bụla dị na UAE, ị nwere ike ide akwụkwọ nyefee na họtel gị. Ọ bụrụ na ekwenyebeghị ọrụ a ma ọ bụ adịghị, ị nwere ike iji ọrụ taxi mpaghara. Site na ọdụ ụgbọ elu Dubai ka ndị niile na-agba ọsọ site n'elekere 5:00 nke ụtụtụ ruo mgbe elekere 24:00 enwere bọs.
O kwesịkwara ịtụle nhọrọ nke ịbata n'ọdụ ụgbọelu Air Arabia na Shaju. Ebe dị site na Sharjah na Fujairah 113 kilomita, a na-emeri ya maka awa 1 site na tagzi.
Kichin nke Israel
Hotels ke Israel
Kedu ihe iji weta si Saudi Arabia?
A visa na Saudi Arabia
Royal Canin maka nwamba
Ihe aka mma site n'aka aka
Uwe ejiji ogologo oge
Ugo ziri ezi nke ndị uwe ojii
Kedu ka esi emeso ikuku mmiri?
Gucci akpụkpọ ụkwụ
Salmon na ogwu na oven
Ihe eji eme Melancholic
Roses si satin ribbons
Ịchọ mma akwa
Mwepụ nke ọbara ọbara
The Til osisi
Bulimia - ọgwụgwọ n'ụlọ
Ọzụzụ agụmakwụkwọ maka ndị na-eto eto
Kedu ka esi eme akwukwo?
Nyocha nke ndụ na afọ ime - Nsonaazụ
Alec na Hilaria Baldwin bipụtara foto mbụ nke nwa nwoke a mụrụ ọhụrụ Romeo
Ugwu Marble (Chile)
Kwachaa nwa currant na ụbịa
Oily scalp - ihe ị ga-eme?